Home » Shoes » January 2016 20% Gbanyụọ akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ na akpụkpọ ụkwụ na nke 1 / 15 / 16
Were 20% Gbanye Iwu nke $ 99 ma ọ bụ More!
Jiri Usoro Nkwado: FRESHSTART20 – Valid 1/1/16-1/15/16
Were 20% gbanyụọ iwu gị nke $ 99 + na Shoes.com! Jiri koodu: FRESHSTART20. Na-enye 1 / 1-1 / 15 ezigbo.
Uwe Azụ Ndị Na-egosi Nwaanyị: Onye Na-enye Ọhụụ Na-adọrọ Mmasị
Egwuregwu ahụ na-adọrọ adọrọ na-eme ka ọ dị elu na mpempe akwụkwọ iBR + ™, XT-900 ™, na ngwangwa, mpempe akwụkwọ dị arọ nke nwere ụkwụ akpụ ụkwụ PWRGRID + EVA. Ihe Ntuziaka 9 na-egosi EVERUN; ihe kachasị ọhụrụ na-emepụta ihe na ihe ọhụrụ. EVERUN nwere nzaghachi na-eme ka ọ dịkwuo nso ụkwụ gị maka nchebe dị mma n'agbata ụkwụ gị na ebe dị elu.
Akpụkpọ ụkwụ ndị mmadụ pụtara: Asics GT-2000
Ngwurugwu dị ọcha nke akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ ASICS GT-2000 emelitere na-eme ka ị chee na ị na-agba ọsọ na ikuku. Ezubere iji kwado ma na-eduzi nkwụsị nke nnọpụiche nye onye na-agba ọsọ ọsọ, agba akpụkpọ ụkwụ ndị ikom a na-ebuli ọtụtụ atụmatụ dị elu, site na FluidRide ™ midsole na njikọta ya na ntanye na Dynamic DuoMax® maka nkwụsi ike na nkwado . Rearfoot na forefoot GEL® na-enyekwu ndọtị dịka ị na-agbanwe site n'usoro okirikiri, mgbe ikiri ụkwụ na ikiri ụkwụ dị mma na nkwado dị mma. Ngwurugwu na-emepụta rubber na-enyere aka ịnọgide na-eguzobe, mile mile.